တံတားများမော်ကွန်း - ထို rayhab
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ရွာတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံသားများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျော့ပါးစေရန်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း, သိပ္ပံနဲ့ရေးရာ Semet များ၏ရွာ၏ဗဟိုအကြားKaramürselအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းဦးစီးဌာနတို့ကဖန်ဆင်းတံတားများနှင့်လက်လှမ်းလမ်းများတည်ဆောက်ထားလျက်ရှိသည်။ ခရိုင်ထိုင်ခုံ [ပို ... ]
သမိုင်းဝင် Sakarya တံတားမှာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တံတားပေါ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သန့်ရှင်းမှုအသစ် balustrade ရထားလမ်း၏ installation ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းဖျက်သိမ်းဖို့, ကွန်ကရစ်ပြုပြင်အသေးစားပြဿနာများ၏လုပ်မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ သိပ္ပံရေးရာ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
Karabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (Kardemir) Inc က ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုတံတားထုတ်လုပ်ဖို့စတင် 1915 500 တန်ချိန် Canakkale တံတားပံ့ပိုးမှု Frame ကကြေညာခဲ့သည်။ KARDEMİRKarçelကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုတံတားမှချိတ်ဆက်လုပ်ကြေညာချက်ထဲမှာ [ပို ... ]
တံတားနှင့်အဝေးပြေးဝင်ငွေခွန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ-ဇွန်လကာလကနေတံတားနဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးင်ငွေဟာအာဇာနည်နေ့၏ဇူလိုင်လအတွင်းအဝေးပြေး, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 906 ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့် Fatih Sultan Mehmet တံတားများနှင့်အညီတစျထောငျ 252 712 15 သန်းပေါင်ခဲ့ [ပို ... ]
1915 Canakkale တံတားနည်းပညာဆိုင်ရာ Tours မှ
1915 ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေး Canakkale တံတားပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီးတီး Manager ကို Omer က Bolat နှင့်နည်းပညာန်ထမ်းတစ်ဦးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခရီးစဉ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ အရပျ၌ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး-ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Sezgin KÜÇÜKBEKနှင့် City Manager ကို Omer က Bolat 's [ပို ... ]
Karamursel အတွက် Semet ရဲ့တံတားသတို့သမီးသတ်သွားပါပြီ
4 ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဝေးပြေး, Bridges နှင့်ဥမင်လိုဏ်လမ်းများကုန်စည်ပြပွဲ
အဆိုပါလမ်းကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အရင်းအမြစ်များအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိုအပ်အကြီးစားစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူ, တူရကီအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကလက်လှမ်းအောင်, ရွှေ့ဖို့ယနေ့ကမ္ဘာ့အာရုံစိုက်မှုစတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကမ္ဘာကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏ရှေ့တန်းမှသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ လောကီသားတို့သည်အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန, IMM လျှော့အစိမ်းရောင်အလင်းများ Burning ရန်ဆန္ဒရှိ
IMM, Yavuz Sultan Selim တံတားနှင့်မနေ့ကသူတို့ကဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြတ်သန်းခလျှော့ချရန်တောင်းဆိုမှုစေမည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန, ထိုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) အချို့သောတံတားများနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများအတွက်ဝယ်လိုအားလျှော့ချမြို့ပြများတွင်ကြုံတွေ့သည့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုဖို့အဖြေတစ်ခုအဆိုပြုနိုင်ရန်အတွက် [ပို ... ]
သဘာဝဓာတ်ငွေ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ, တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင်လျှပ်စစ်မီး, လက်ဖက်ရည်, သကြားနဲ့ဘာ့ဂ်မျက်စိကိုများ၏တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လအတွက်ပြည်နယ်-ပြေးနှင့် 15 နှင့်အတူ Fatih Sultan Mehmet တံတားအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဖြတ်သန်းခမြှင့်ရန်အနှစ်ကုန်သည်အထိလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ [ပို ... ]
FSM ဖျေါပွခကျြကနေ IMM: 'ဆောင်းရာသီဇယားသို့ကူးပြောင်း Metrobus Shuttle နာရီ' '
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ကွဲပြားခြားနားသောအခြားရွေးချယ်စရာပေးနိုင်ရန်အတွက်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအစ္စတန်ဘူလ်သုံးပြီး 15 ဇူလိုင်လအာဇာနည်နေ့တံတားနှင့်အတူ Fatih Sultan Mehmet တံတားစဉ်အတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်, Yavuz ဆူလ်တန်အ Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအသုံးပြုမှုအခကြေးငွေနှင့်အတူ Selim တံတား၏လျှော့ချတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ [ပို ... ]
ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်3။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးတာကိုခံနေရအတူတူပေးနေတာနေသော်လည်းတံတား Be ရန်
Fatih Sultan Mehmet တံတားမယုံနိုင်စရာဖြစ်လာအစ္စတန်ဘူလ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်အတွက်အသွားအလာဆောင်ခဲ့လေ၏။ ပိုများသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုယခင်နှစ်များတွင်တံတားယာဉ်အသွားအလာအပေါ်ပြုမိနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုအတိအကျအဘယ်အရာကိုဖွင့်ပေမယ့်တစ်ဦးခြားနားချက်ဤအချိန်ရှိ၏။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့်တတိယ [ပို ... ]
အဆိုပါ Fatih Sultan Mehmet တံတားအတွက်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စုစုပေါင်း 52 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းယူအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အသွားအလာမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်အောက်ပိုင်းသေခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နွေရာသီအချိန်ဇယား၏သွားတာနဲ့အတူပေးနေတာနှစ်ဆတိုးလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားများသည်ဤအတူကားတစ်စီးထွက်ခွာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကနေထွက်ပြေးလာ [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဇူလိုင်လ 15 FSM တံတားဖျေါပွခကျြကနေအာဇာနည်နေ့
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာန 15 ဇူလိုင်လအာဇာနည်နေ့တံတားအပေါင်းတို့နှင့်လမ်းကြောင်းအတွက်ဘယ်အလုပ်ကိုမျှမရှိကတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်အဖြစ်အသွားအလာမှပွင့်လင်းကြသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာနထံမှစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်သကဲ့သို့၎င်း, "တချို့စာနယ်ဇင်းထုတ်လွှင့် Fatih ဆူလ်တန် [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်İmamoğlu: 'တံတားယာဉ်အသွားအလာလေ့လာမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Will မှ Related အကြံပြုချက်များ' '
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကွံဉာဏျအဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏လုပျငနျးလုပ်နေတာမည်ဖြစ်ကြောင်း, ဒီဖြေရှင်းပုံကိုအလုပ်လုပ်နေကြသည် "ကြောင့် Fatih Sultan Mehmet တံတားလေ့လာမှုအသွားအလာဖို့အာရုံကိုဆွဲ။ ယနေ့အဖြစ်ကြှနျုပျတို့သညျ "အစ္စတန်ဘူလ်၏အရေးပေါ်ကိစ္စများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ရတယ် [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်း, ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်နိုင်ငံသားများနေဆဲသူတို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝေဒနာတွေလုပ်ဆောင်နေသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, Karamürselစင်တာ Semet သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနသမ္မတဖြင့်ကျေးရွာနှင့်လက်လှမ်းလမ်းများအကြားတံတားတည်ဆောက်ရန်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ခရိုင်ထိုင်ခုံ [ပို ... ]
"20193ဘီလီယံခန့် lira ဥပဒေကြမ်း": တံတားနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Eurasian နောက်ဆုံးယာဉ်များ၏အရေအတွက်လျှော့ချ
အဆိုပါဆနျ့ကငျြဘသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံန်ကြီးဌာနကိန်းဂဏန်းများထောက်ပြဖို့ဇွန်လအကောင်အထည်ဖော် Osmangazi တံတား, Yavuz Sultan Selim တံတားနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်မော်တော်ယာဉ်များများ၏အရေအတွက် Eurasian ပထမလေးလအတွင်း, ထိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏တစ်နှစ်အဖြစ် Build-Operate-လွှဲပြောင်းစီမံကိန်းများကိုထုတ်ဖော်မပြုခဲ့ [ပို ... ]
အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသွေးလွှတ်ကြောများနှင့်နိုင်ငံသားများဟာသူတို့ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးလျော့ပါးစေရန်ဗဟိုအပြင်ဘက်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်, Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ခရိုင်အတွင်းအလုပ်အရေးကြီးပုံကိုအလေးထားပရောဂျက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ကွေ့ခရိုင် Chirag ရပ်ကွက်၌ဤနယ်ပယ်နှင့်အတူ Derince ခရိုင် Cavuslu အကြားဆက်သွယ်မှုကို [ပို ... ]
နိုင်ငံသားများကူးတို့တံတား Osmangazi လက်ဝဲသဖြင့်ခရီးစဉ် Blank ကပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်
အဆိုပါပုံဖမ်းတွန်းလှည်းဖို့နိုင်ငံသားတွေ Bayram အားလပ်ရက်ရွေးချယ်မှု Eskihisar ကူးတို့သင်္ဘောကျင်းခဲ့သည်။ အရိုးစု၏နိုင်ငံသားများအတွက်£ 103 Osmangazi တံတားများအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူးရသောတော်တော်များများတလမ်းအသွားအလာသေဆုံးသူ, ဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ကနေနိုင်ငံသားအကဲဖြတ်မနက်စောစောအားလပ်ရက် [ပို ... ]
Yavuz Sultan Selim Yildirim နှင့်တံတားများ, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ-operate-လွှဲပြောင်း (BOT စနစ်) မော်ဒယ်ဖြင့်မြောက်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်အတူတညျဆောကျခဲ့သညျ။ ဤစီမံကိန်းအကူးအပြောင်းအခကြေးငွေအတွက်နိုင်ငံခြားယာဉ်များအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဖြတ်သန်းယာဉ်များအာမခံစတိတ်, ဒီ [ပို ... ]
ထို့နောက်ဖွစျမညျဘယျလိုဒီအ Mega စီမံကိန်းများ?
မှားသောအရပ်ကိုလုပ်လေ၏ကျနော်တို့အန္တရာယ်နှင့်အသုံးမပြုနိုင်ကြီးမားလေဆိပ်ဘာလုပ်သလဲ? ဖျက်ဆီးခံရမဟုတ် Kicksey- သင်ပြုလျှင်သင်တဦးတည်းလက်ပေးဆောင်နေအသစ်တစ်ခုတဦးတည်း, ခရီးသည်ပြီးသားပိုက်ဆံအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တူညီသည့်အကူးအပြောင်းကိုအာမခံတံတားများသက်ဆိုင်သည်။ မြို့တော်ရဲ့ဆေးရုံများ, ရုံးများ, ကုန်တိုက်ကြီးတွေအတွင်းအိုးအိမ်မြေယာ [ပို ... ]
ဟယ်လိုအပေါ်အောင်မင်း Osmangazi တံတား Paid?
Osmangazi တံတားကနေအကူးအပြောင်းပှဲမှာပေးဆောင်ခံရဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ Build - Operate - လွှဲပြောင်း (BOT စနစ်) Yavuz Sultan Selim တံတား (။3တံတား), Izmit ဂလားပင်လယ်အော်တံတားနှင့် Osmangazi Fitr အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဆက်သွယ်ထားသည့် Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, လုပ် [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, အဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (KGM) ကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်တံတားများ operating, 10 ဇွန်လ xnumx'y နာရီသည်အထိအခမဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan သည်မနက်စောစော Al-Fitr အားလပ်ရက်အဖြစ်မနက်ဖြန်စတင်ပါလိမ့်မည်, [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Hayri အဆိုပါ Bosphorus တံတားက၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောထားပါတယ်သုံးပြီးသမ္မတBaraçlıသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) မော်တော်ယာဉ်လူတန်းစားမှာစုဝေးစေတော်မူ၏။ အသစ်ကစည်းမျဉ်းများယနေ့ထိုးမြဲလက်မှတ် (31.05.2019) ၏ပြီးစီးအောက်ပါအင်အားစုသို့ဝင်ကြ၏။ UKOME အစည်းအဝေး; မက်စ် Load အလေးချိန် [ပို ... ]
AKP 23 ရွေးကောက်ပွဲအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဇွန်လအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲနှင့်ပင်နယ်တီမှခွင့်လွှတ်ခြင်း၏အိတ်တွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့ပါလီမန်ကအတည်ပြုတံတားဥပဒေများကိုဖြတ်ကူးပါလိမ့်မည်မတိုင်မီလွှတ်တော်သို့တင်ပြခဲ့သည်။ 23 ဇွန်လ AKP အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မှာထပ်ကျင်းပလိမ့်မည်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီလွှတ်တော်သို့တင်ပြ [ပို ... ]